သင်ငွေစုဆောင်းရန်စျေးပေါသော7e-book | eReaders အားလုံး
ရှာဖွေနေ စျေးပေါသော e-book? မကြာသေးမီအချိန်များ၌အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်သို့မဟုတ် eReader ရှိခြင်းသည်များသောအားဖြင့်ဤကိရိယာကိုနာမည်အဖြစ်ဆုံးသောနည်းမှာ eBook ဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤဝေါဟာရကိုဆောင်းပါးတစ်လျှောက်လုံးတွင်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်နေရာ၌မဆိုဖတ်ရှု။ ပျော်မွေ့ရန်အသုံးပြုလိမ့်မည်။ အဆင်ပြေလမ်း။ စျေးကွက်တွင်ရရှိနိုင်သည့်ပစ္စည်းအမျိုးအစားများတိုးပွားလာသော်လည်းယနေ့ကျွန်ုပ်တို့သင့်အားကမ်းလှမ်းချင်ပါသည် စျေးပေါသော eBooks ဒါကကျွန်တော်တို့ကိုပိုက်ဆံသိပ်မသုံးဘဲဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုပျော်မွေ့စေတယ်။
ထို့ကြောင့်ရက်အနည်းငယ်အကြာ၌ကွန်ရက်များ၏ကွန်ယက်ကိုသုတေသနပြုပြီး၊ ကျွန်ုပ်တို့စုဆောင်းထားသည့်ဤဆောင်းပါးကိုထုတ်ဝေရန်ထူးဆန်းသည့်အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်များကိုကြိုးစား။ ပင်ကြိုးစားပြီးနောက်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုခံစားရန်စျေးပေါပြီးစံပြအီလက်ထရောနစ်စာအုပ် ၇ လုံး။ သင်သည်သင်၏ပထမဆုံး e-book ကို ၀ ယ်လိုပါကသို့မဟုတ်ငွေအလွန်အကျွံမသုံးစွဲလိုပါကခဲတံနှင့်စာရွက်တစ်ရွက်ကိုမှတ်စုများယူပြီးသင်ပြမည့်ဤစက်ပစ္စည်းများထဲမှတစ်ခုသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးဖြစ်လိမ့်မည်။ တစ်ခုခုကိုကိစ္စ။
1 စျေးပေါ eBooks နှိုင်းယှဉ်
2 အခြေခံ Kindle
5 စွမ်းအင် eReader မက်စ်
7 PocketBook Basic Lux ၂
စျေးပေါ eBooks နှိုင်းယှဉ်
Kobo Libra H2O Ereader၊...
TOPCASE TPU Case အတွက်...
အမေဇုံ ၎င်းသည်အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်ဈေးကွက်တွင်အရေးအပါဆုံးထုတ်လုပ်သူများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးသုံးစွဲသူတစ် ဦး ချင်းစီနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သုံးစွဲလိုသောအရာပေါ် မူတည်၍ ကွဲပြားခြားနားသောကိရိယာများကိုပေးသည်။ အရှေ့ အခြေခံ Kindleလွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်ကအသစ်တဖန်ပြန်လည်သက်တမ်းတိုးထားသော၎င်းသည်အချို့သောနည်းများဖြင့်ခေါ်ဆိုရန်ထည့်သွင်းသည့်ကိရိယာဖြစ်ပြီး၎င်းသည်ငွေအနည်းအကျဉ်းသာသုံးစွဲနေစဉ်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းလောကတွင်ကျွန်ုပ်တို့စတင်နိုင်ရန်ခွင့်ပြုလိမ့်မည်။
ဤအခြေခံ Kindle သည်သူတို့၏အီလက်ထရောနစ်စာအုပ်များစွာကိုမတောင်းဘဲနှင့်ရံဖန်ရံခါအခါအားလျော်စွာအသုံးပြုရန် eBook ကိုသာရှာဖွေနေသောအသုံးပြုသူများအတွက်လည်းအသုံးပြုနိုင်သည်။
ဒီမှာငါတို့မင်းကိုပြတယ် ပြီးခဲ့သည့်ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်မှစ၍ ၎င်း၏ဗားရှင်းအသစ်တွင်ရရှိနိုင်သည့်အခြေခံအခြေခံ Kindle ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များ;
မြင်ကွင်း - ၆ လက်မအရွယ် E Ink ပုလဲနည်းပညာဖြင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေသော font နည်းပညာ၊ မီးခိုးရောင်အကြေး ၁၆ ခုနှင့် resolution ၆၀၀ x ၈၀၀ ပစ်ဇယ်နှင့် ၁၆၇ dpi
ဆက်သွယ်မှု: USB port, Wifi
Internal memory - ထောင်နှင့်ချီသောစာအုပ်များအတွက်သိုလှောင်နိုင်မှုနှင့် Amazon ပါဝင်မှုအားလုံးအတွက်အခမဲ့သိုလှောင်မှုပမာဏ ၄ GB ဖြစ်သည်
ဘက်ထရီ - အမေဇုံမှရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရဖုန်းအားသွင်းရန်မလိုပဲရက်သတ္တပတ်များစွာကြာသည်
MP3 ဖွင့်စက် - မရှိပါ
ထောက်ပံ့ထားသော ebook အမျိုးအစားများ - Format 8 Kindle (AZW3), Kindle (AZW), TXT, PDF, အကာအကွယ်မဲ့ MOBI၊ PRC၊ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP
စျေးနှုန်း: 79 ယူရို
အကယ်စင်စစ်သင်တို့တွင်များစွာသောဤစာရင်းထဲတွင်ကြည့်ရှုခြင်းဖြင့်ထိမိလိမ့်မည် Kindle Paperwhiteဒါပေမယ့်ဒါ ဒီ Amazon စက်ကစျေးပေါတဲ့ eReader ပါ။ ကျွန်တော်တို့ကစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အချက်တွေကိုထည့်သွင်းစဉ်းစားမယ်ဆိုရင် ကျနော်တို့ပြောနိုင်တဲ့စျေးနှုန်းများအတွက်အလွန်အကျွံမဟုတ်ပါဘူး။ မျက်နှာပြင်၏အရည်အသွေးနှင့်အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်သည်သံသယဖြစ်စရာမလိုပါ။ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားအလင်းရောင်ပေးထားသောကြောင့်မည်သည့်ပတ်ဝန်းကျင်နှင့်နေရာတွင်မဆိုစာဖတ်နိုင်ခွင့်ရှိသည်။
ယခုကျွန်ုပ်တို့ Amazon ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များအားပြန်လည်သုံးသပ်ရန်သွားသည်။
Display: ၃၀၀ dpi နှင့်ပေါင်းစပ်အလင်းပါသည့် ၆ လက်မအရွယ် resolution မြင့်
ဆက်သွယ်မှု WiFi၊ 3G နှင့် USB
Internal memory:4GB; စာအုပ်ထောင်ပေါင်းများစွာ၏စွမ်းရည်နှင့်အတူ
Battery - အမေဇုံကိုသာမန်အသုံးပြုမှုဖြင့်ရက်သတ္တပတ်များစွာကြာရှည်ခံရန်လိုအပ်သည်
Ebook အမျိုးအစားများ - Kindle (AZW3)၊ Kindle (AZW), TXT, PDF၊ အကာအကွယ်မဲ့ MOBI၊ ပြောင်းလဲခြင်းဖြင့် HTML, DOC, DOCX, JPEG, GIF, PNG, BMP
စျေးနှုန်း: 129.99 ယူရို
ဒီ Kindle Paperwhite ၏စျေးနှုန်းကို ၁၂၉.၉၉ ယူရိုရှိပြီးစျေးနှုန်းချိုသာစွာရောင်းချနိုင်သော်လည်း၊ ကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လည်ပေးအပ်သည့်အရာသည်စိတ်ဝင်စားစရာထက်ပိုသည်။ သင်သည်သင်၏ eReader အသစ်ကို ၀ ယ်ရန်အလျင်အမြန်မဟုတ်ပါက Amazon သည်၎င်း၏ Kindle ၏စျေးနှုန်းကိုအချိန်နှင့်အမျှအလွန်နိမ့်ကျသည်ကိုသင်သိသင့်သည်။ ထို့ကြောင့်အနည်းငယ်မျှသာငိုကြွေးခြင်းနှင့် ၀ ယ်ယူခြင်းအားဖြင့်၎င်းကိုစျေးနှုန်းချိုသာစွာဖြင့်ဝယ်ယူနိုင်သည်။ ။
Kobo Amazon နှင့်အတူသူတို့သည် eReader စျေးကွက်တွင်အသိအမှတ်ပြုဆုံးကုမ္ပဏီနှစ်ခုဖြစ်သည်။ စျေးကွက်တွင်အားကောင်း။ စျေးကြီးသောအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်များရှိသည့်အပြင်ကုမ္ပဏီနှစ်ခုစလုံးသည်သုံးစွဲသူများအားစိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသောအရည်အသွေးရှိသောအခြားစျေးသက်သာသောပစ္စည်းများကိုလည်းပေးသည်။
ဒီဥပမာတစ်ခုကဒီဖြစ်ပါတယ် Kobo Leisosa အလွန်နည်းပါးသောယူရို ၁၀၀ ထက်ကျော်သောစျေးနှုန်းဖြင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းလောကသို့ ၀ င်ရောက်ရန်နှင့်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာအုပ်များကိုများစွာခံစားရန်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်။
နောက်ကျနော်တို့အဓိကပြန်လည်သုံးသပ်သွားနေကြသည် ဒီ Kobo Leisosa ၏အင်္ဂါရပ်များနှင့်အသေးစိတ်အချက်အလက်များ;
မျက်နှာပြင် - ၆ လက်မပုလဲအီး Ink ထိတွေ့မှု
ဆက်သွယ်မှု - Wi-Fi 802.11b/ g / n နှင့် Micro USB
Internal memory: 8 GB (သို့) အတူတူပါပဲ၊ စာအုပ် ၆၀၀၀ အထိသိမ်းဆည်းထားနိုင်သည်
ဘက်ထရီ - ခန့်မှန်းခြေကြာချိန်နှင့်ပုံမှန် ၂ လအထိအသုံးပြုသည်
Ebook အမျိုးအစားများ - EPUB, PDF, MOBI, JPG, TXT နှင့် Adobe DRM
စျေးနှုန်း: 99 ယူရို
စွမ်းအင် eReader မက်စ်
စပိန်ကုမ္ပဏီ Energy Sistem သည်စာဖတ်သူများအားလုံးအတွက်တီထွင်မှုစတင်ပြီးကတည်းကစိတ် ၀ င်စားစရာပစ္စည်းများအမြဲတမ်းကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ မကြာသေးမီအချိန်ကသူတို့ဟာစျေးကွက်ထဲမှာအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်အမျိုးမျိုးကိုစတင်ထုတ်ဝေခဲ့ပြီးအချို့မှာဈေးနှုန်းချိုသာစွာနဲ့ရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အရှေ့ စွမ်းအင် eReader မက်စ် ၎င်းသည်၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးအနည်းဆုံးယူရို ၉၀ ဖြင့် ၀ ယ်နိုင်သည်။
ထို့နောက်ကျွန်ုပ်တို့သည်ပြန်လည်သုံးသပ်သွားမည်ဖြစ်သည် ဒီ eReader ၏အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ စွမ်းအင်စနစ်မှ၊
ရှုထောင့်: 67 x ကို 113 x ကို 8,1 မီလီမီတာ
မျက်နှာပြင် - ၂.၆၆၀ x ၁၀၈၀ ပစ်ဇယ်နှင့် ၅.၉၉ လက်မ
ဆက်သွယ်မှု - micro-USB
Internal memory - microSD ကဒ်ဖြင့် 8 GB တိုးချဲ့နိုင်သည်
Battery - ဖုန်းကိုရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အသုံးပြုခွင့်ပေးသောစွမ်းရည်ကြီးမားသည်
ပံ့ပိုးထားသော ebook အမျိုးအစားများ - ePub, FB2, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT
စျေးနှုန်း: 86,80 ယူရို
Billow နည်းပညာ E03E -...
အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်စျေးကွက်သည်မကြာသေးမီရက်များအတွင်းအကြီးအကျယ်တိုးတက်ခဲ့ပြီးကုမ္ပဏီအချို့ကအများပြည်သူသိရှိနိုင်ရန် ၀ င်ရောက်နိုင်ခဲ့သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့ကိုပိုမိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်ကောင်းသောစျေးနှုန်းများဖြင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ပစ္စည်းများကိုကမ်းလှမ်းခဲ့သည်။ ဒီဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည် Billow E03FL, အစဉ်အမြဲလုံခြုံရေးအပိုဖြစ်သောအမေဇုံအားဖြင့်စျေးကွက်။
BQ Cervantes Touch Light ပိတ်ထားသည်
သူ့ရဲ့စျေးနှုန်းက ၇၅ ယူရိုဖြစ်ပြီးသံသယဖြစ်စရာမလိုပါဘူး၊ သုံးစွဲသူတော်တော်များများကရှာဖွေနေတာထက်လုံလောက်လောက်ပါတယ်။ အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်ရှိခြင်းသည်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း၎င်းတွင်ထူးခြားသောအရည်အသွေးနှင့်စွမ်းအားထက်မကသောဖြစ်နိုင်သည်။ ဤနေရာတွင်သင်က၎င်းအကြောင်းပိုမိုလေ့လာနိုင်ရန်၎င်း၏လက္ခဏာများနှင့်သတ်မှတ်ချက်များကိုပြသသည်။
Internal memory - microSD ကဒ်ဖြင့်4GB တိုးချဲ့နိုင်သည်
ဘက်ထရီ - နာရီပေါင်း ၇၂၀ အထိကြာရှည်ခံနိုင်သောလီသီယမ်
Ebook အမျိုးအစားများ - CHM, DOC, DjVu, FB2, HTML, MOBI, PDB, PDF, PRC, RTF, TXT, ePub
စျေးနှုန်း: 75 ယူရို
PocketBook Basic Lux ၂
သင်၏ဘတ်ဂျက်သည် eReader ရရှိရန်သေးငယ်လျှင်၊ PocketBook ကုမ္ပဏီ e-book ၎င်းသည်ကောင်းမွန်သောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်နိုင်ပြီး၎င်း၏ဈေးနှုန်းမှာယူရို ၈၉.၉၉ သာရှိသည်။ သို့သော်ဤစျေးနှုန်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်သတိပြုမိသည့်အတွက်ဒစ်ဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုနှစ်သက်ရန်အလွန်အစွမ်းထက်သော၊
ဟုတ်ပါတယ်၊ ဒီဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းလောကမှာသင်စချင်တယ်ဆိုရင် (သို့) သင်ဟာ avid စာဖတ်သူတစ်ယောက်မဟုတ်ရင်၊ ဒီစက်ဟာသင့်အတွက်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာသင်သိနိုင်သည် အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ ဒီ eReader ၏,
အရွယ်အစား - ၁၆၁.၃ × ၁၀၈ × ၈ မီလီမီတာ
Display: ၇၅၈ x ၁၀၂၄ resolution ရှိတဲ့ ၆ လက်မ e-ink
Internal memory - microSD ကဒ်ပြားဖြင့်သိုလှောင်မှုကိုတိုးချဲ့နိုင်သည့်ပမာဏနှင့်အတူ4GB
ဘက်ထရီ: 1.800 mAh
Ebook အမျိုးအစားများ - PDF၊ TXT, FB2, EPUB, RTF, PDB, MOBI နှင့် HTML
အဆိုပါ အကယ်. စွမ်းအင် eReader မျက်နှာပြင် ပစ္စည်းတစ်ခုကစျေးကြီးလွန်းတယ်၊ ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းကနေဈေးပိုပေးရတဲ့ e-book ကအမြဲတမ်းရှိတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ဟန်ဆောင်မှုများကိုနည်းနည်းလေးလျှော့ချခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်စွမ်းအင်စနစ် eReader Slim၊ စျေးသက်သာသည့်အီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်တစ်အုပ်ကိုဖတ်ရှုလိုသူမည်သူမဆိုအတွက်လုံလောက်သည်ထက်ပိုနိုင်သည်။
သင်ဤ eReader ကဘာကိုကမ်းလှမ်းသည်ကိုပိုမိုနက်ရှိုင်းစွာသိလိုပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပြသပါမည် အဓိကအင်္ဂါရပ်များနှင့်သတ်မှတ်ချက်များ;
မျက်နှာပြင် - ၆ လက်မ resolution (၆၀၀ x ၈၀၀ ပစ်ဇယ်) ။ Eink ပုလဲ HD, အီလက်ထရောနစ်မှင်6မီးခိုးရောင်အဆင့်ဆင့်။
Internal memory - ၈ GB GB ကို microSD ကဒ်များဖြင့်တိုးချဲ့နိုင်သည်
ဘက်ထရီ: ကြာရှည်ခံ lithium
Ebook အမျိုးအစားများ - ePub, FB2, MOBI, PDB, PDF, RTF, TXT
စျေးနှုန်း: 69.90 ယူရို
သိသာထင်ရှားတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာစျေးကွက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးအီလက်ထရွန်နစ်စာအုပ်တွေထဲကတစ်ခုကိုမရင်ဆိုင်ရပါဘူး၊ ဒါပေမယ့်ဒီဟာကအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်ပြီးအလွန်ချွေတာပြီးဒီဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုစိတ် ၀ င်စားစရာကောင်းတဲ့နည်းထက်ပိုပြီးခံစားနိုင်မှာပါ။
သင်ပြမည့်အရာများအနက်မည်သည့် eReader ကိုသင် ၀ ယ်တော့မည်ကိုဆုံးဖြတ်ပြီးပြီလား။။ ဤစာမူသို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တို့ရောက်ရှိနေသည့်လူမှုကွန်ယက်များမှမှတ်ချက်များအတွက်သီးသန့်ထားသည့်နေရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ကိုပြောပြပါ။ သင်ဤစျေးနှုန်းချိုသာသောစျေးနှုန်းချိုသာသောဤအမျိုးအစားကိုပိုမိုစျေးပေါသော eBook ကိုထည့်သွင်းမည်ဆိုပါစို့၊ ၎င်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားဒီဂျစ်တယ်စာဖတ်ခြင်းကိုပျော်မွေ့စေနိုင်မည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့အားအသိပေးပါ။
သင်ပိုမို eReaders မော်ဒယ်များကိုမြင်ချင်လျှင်, ဒီ link သင်ရှာဖွေနေသည့်အရာနှင့်အသင့်တော်ဆုံးဖြစ်သောအကောင်းဆုံးကမ်းလှမ်းမှုကိုသင်ရရှိလိမ့်မည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - eReaders အားလုံး » hardware » စာဖတ်သူများ » စျေးပေါသော e-book များ
မင်္ဂလာနံနက်ခင်းကျွန်ုပ်ပထမ ဦး ဆုံးအကြိမ်ဖတ်ရှုနိုင်သည့်စွမ်းအင် eReader ဖန်သားပြင် HD နှင့်စာအုပ်များကိုဒေါင်းလုပ်ဆွဲရန်မည်သို့မည်ပုံကျွန်ုပ်မသိပါ။ ၀ ဘ်ဆိုဒ်များစွာကသူတို့၏ ebook များသည်ကျွန်ုပ်၏ eredar နှင့်မကိုက်ညီကြောင်းပြောကြသည်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်